Changchun BCHT Biotechnology Co. [Jilin,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Asia ထုတ်ကုန်: 1% - 10% Cert: GMP
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး (တိုက်ရိုက်) >
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Gelatin အခမဲ့တိုက်ရိုက်နောက်ဆုံးအစုလိုက်(2 များအတွက်စုစုပေါင်း Gelatin အခမဲ့တိုက်ရိုက်နောက်ဆုံးအစုလိုက် ထုတ်ကုန်များ)
ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်: Mr. Jason Jiang
Gelatin အခမဲ့တိုက်ရိုက်နောက်ဆုံးအစုလိုက် - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ Gelatin အခမဲ့တိုက်ရိုက်နောက်ဆုံးအစုလိုက် ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား Gelatin အခမဲ့တိုက်ရိုက်နောက်ဆုံးအစုလိုက် / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် Gelatin အခမဲ့တိုက်ရိုက်နောက်ဆုံးအစုလိုက် များထဲမှ Changchun BCHT Biotechnology Co. ။
မော်ဒယ်နံပါတ်။: Bulk Liquid
tag ကို: gelatin အခမဲ့နောက်ဆုံးအစုလိုက် , bulk တိုက်ရိုက်နောက်ဆုံး bulk , gelatin အခမဲ့တိုက်ရိုက်နောက်ဆုံးအစုလိုက်
အဆိုပါရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးရေကျောက်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်သူကိုအသက်အရွယ်အသက် 13 နှစ်အောက်ကလေးများအားလုံးအဘို့အကြံပြုသည်။ ဒါဟာအစကာကွယ်ဆေးထိုးကြပြီမဟုတ်ခြင်းနှင့်ရေကျောက်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအတွက်အကြံပြုသည်။...
tag ကို: ဇီဝနည်းပညာနောက်ဆုံးအစုလိုက် Attenuated , ဇီဝနည်းပညာ Long ကသက်တမ်းကာလ attenuation , ဇီဝနည်းပညာ Lyophilized attenuation
အဆိုပါ ထိရောက်မှု ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်အချက်များများစွာအပေါ်မှီခိုဖြစ်ပါသည်: ရောဂါကိုယ်နှိုက်က (အချို့ရောဂါများအတွက်ကာကွယ်ဆေးထိုးအခြားသူတွေထက်ပိုကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်) ကာကွယ်ဆေး၏ strain (အချို့ကာကွယ်ဆေးမှသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိပါတယ်,...
ရေကျောက်များအတွက်ကာကွယ်ဆေး gelatin-အခမဲ့ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale Gelatin အခမဲ့တိုက်ရိုက်နောက်ဆုံးအစုလိုက် from China, Need to find cheap Gelatin အခမဲ့တိုက်ရိုက်နောက်ဆုံးအစုလိုက် as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on Gelatin အခမဲ့တိုက်ရိုက်နောက်ဆုံးအစုလိုက် produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our Gelatin အခမဲ့တိုက်ရိုက်နောက်ဆုံးအစုလိုက်, We'll reply you in fastest.
လူ့အသုံးပြုမှု Vero ဆဲလ်များအတွက် bulk ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး (Vero ဆဲလ်) ၏ bulk အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး Vero ၏ bulk အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အခွေးရူးကာကွယ်ဆေး၏ bulk အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး , လူ့အသုံးပြုမှုများအတွက်ခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေး , ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ bulk , ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး၏ bulk , PFS ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး , Exenatide Acetate
ကြှနျုပျတို့နောကျလိုကျပါ:     
မူပိုင်ခွင့်© 2020 Changchun BCHT Biotechnology Co. All rights reserved ။